TrustTech Technology - Myanmar Classified Ads | မွနျမာ အခမဲ့ ကွျောငွာ | Myanmar Advertising
Home » Services » Business Services » TrustTech Technology
Address: တိုက်(၆၀၀) မြေညီထပ် သီရိမြိုင် (၈)လမ်း (၁၃) ရပ်ကွက် လှိုင်မြို့နယ်
Contact Number: 09254676871, 09421162571, 09420815321
Email Address: trusttechtechnology@gmail.com
Listed: June 18, 2017 11:28 pm
ကျွန်တော်တို့ TrustTech Technology သင်တန်းကျောင်းမှ
လူကြီးမင်းတို့၏ ကုမ္ပဏီများအတွက် ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ရန်
လိုအပ်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာ အ၀၀ကို ကိုယ်ပိုင် Application များဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ၀န်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကိုယ်ပိုင် Infrastructure တခု ထားရှိရန် အခက်ခဲရှိသောသူများအတွက် Cloud Service တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေလွယ်ကူအောင်လည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့တည်ဆောက်လိုသော စနစ်အား အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ရန် TrushTech သို့ယခုပင် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ Make You Better!
TrustTech သင်တန်း၊ တိုက်အမှတ် ၆၀၀၊ မြေညီထပ်, သီရိမြိုင် ၈လမ်း , ၁၃ ရပ်ကွက်, လှိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ 
Phone- 09254676871, 09421162571, 09420815321.
Email- trusttechtechnology@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Ad Reference ID: 88559438ee8eeebf
Listed by: trusttechtechnology
Other items listed by trusttechtechnology
Oracle12c Database Course
Latest items listed by trusttechtechnology »
All times are GMT 6.5. The time now is 8:52 am.